Belarus " Journey-Assist - Natiora. Hitan'ny olona. Ny kolontsaina.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Eoropa » Belarosia
Jeografia sy seranam-piaramanidina
Accommodation. trano fandraisam-bahiny
Ecotourism any Belarus
1 jona, 2020
Mihaona amin'i Belarus
Belarus dia firenena manana natiora tsara tarehy, fitsangatsanganana fitsangatsanganana mahaliana ary mety faran'izay malalaka amin'ny fialan-tsasatra somary lafo. Ny ivom-pizahantany lehibe any Belarus dia Gomel, Minsk, Brest, Polotsk, tendrombohitra Yakutsk, Belovezhskaya Pushcha.
Ny renivohitr'i Belarus dia Minsk. (tranombokim-pirenena misy sary)
Gomel amin'ny alina
Tanànan'ny any Brest
National Park "Belovezhskaya Pushcha"
Belarus - ny havokavok'i Eropa
Ity firenena ity dia antsoina hoe "avokavok'i Eropa". Tena sariaka amin'ny vahiny izy. Manana tantara manan-karena izy, tamin'ny andro taloha dia fiefdom an'ny Radziwills ary anisan'ny fanjakana litoanianina. Izy io dia manasongadina ny fanamaivanana fisaka sy ny endrika mahafinaritra.
Ny tombony azon'i Belarus ho fanjakana ao Eropa
Ny tombotsoany dia azo voatanisa nandritra ny fotoana maharitra. Tian'i Belarus ny vidiny tena ambany (ho an'i Eropa), ny fizahan-tantara misy azy, ny kalitaony avo lenta, ny hatsarany tsara tarehy, ny toetra tsara ary ny endri-javatra maro hafa izay tsy hita maso ny maso mibanjina, fa ny tombony dia mora tsapa amin'ny haavon'ny intuition.
Betsaka ny vahiny voheno momba ny sanatoriums tsara indrindra amin'ity firenena ity. Tsy kely laza dia ny ala sy farihy mahafatifaty mahafinaritra, izay mahafinaritra ny miala voly, miroborobo amin'ny natiora ary mamoaka feo, tabataba ary olan'ny megalopolises. Lalambe malalaka, izay mampahatsiahy kely ny taloha Sovietika ary mahagaga dia mitambatra amin'ny araben-tsolosa tery ary koa ireo lapa manokana tamin'ny taonjato 15-16, ireo tempoly taloha (na Orthodox na katolika) ary tanàna izay misy pancakes malaza voaomana amin'ny tsirony mahatalanjona mahavariana. .
Misy farihy 11 XNUMX eo any Belarus
Ny toetra voajanahary madio miaraka amin'ireo ala sy ala be dia be mahatonga ity firenena ity ho an'ny tia ny ekotourism maneran-tany.
Etsy an-danin'izany, atolotray anao ny namanay vetliva.com... Zalahy mahafinaritra, vonona hanampy foana ka nandany fotoana mahaliana sy misy dikany ny fotoana any Belarus.
Ny zaridainam-pirenena lehibe ao Belarus
Misy valan-javaboary 4 ao amin'ny faritanin'i Belarus. Ireto dia "Braslav Lakes", "Belovezhskaya Pushcha", "Narochanskiy" ary "Pripyatskiy". Ny Berezinsky Biosphere Reserve, izay nanjary nalaza be teo amin'ireo vahiny vahiny eto amin'ity firenena ity, dia arovan'ny fanjakana manokana ihany koa.
National Park Belovezhskaya Pushcha
Biosphere Reserve an'ny Berezinsky
Ho fanampin'ny valan-javaboary sy ny tahiry voalaza etsy ambony, ao amin'ny faritry ny Belarus kely iray dia misy tahiry 85 manan-danja kokoa amin'ny repoblika ary koa tahiry 348 manan-danja eo an-toerana. Amin'ny tsangambato voajanahary ekena an-jatony maro, 305 no manana ambaratongam-panjakana, 542 - iray isam-paritra.
Isaky ny valan-javaboary sy tahiry nasionaly, ny mpizahatany dia afaka mandeha amin'ny lalan'ny ekolojia manokana. Ampy fotsiny ny mandeha amin'ny iray amin'ireo làlana ireo amin'ny faritry ny tahiry "Blue Lakes", miaina fofona lava ny ala sy ny fanjaitra kesika, mankafy ny farihy Bolduk ary miakatra ny tilikambo fandinihana, eo akaikin'ny farihy kely Glubelka, mba hahatsiarovanao mandrakizay ny hakanton'ny natiora Belarus.
Ny Soavan'ny Blue Reserve Reserve
Toetany ao Belarosiana
Belarus dia firenena manana toetr'andro kontinanta antonony, niforona teo ambany fitarihan'ny mason'ny rivotra Atlantika. Mampiavaka azy ny fahavaratra tsy mafana loatra miaraka amin'ny orana matetika, ny ririnina mangatsiaka antonony, ny toetr'andro tsy milamina amin'ny fararano sy lohataona.
Miankina amin'ny faritra manokana ao amin'ny firenena ny mari-pana. Ny isatrin'ny volana Jolay any avaratr'i Belarosià dia +17, ary any amin'ny faritra atsimo +18,5. Janoary isotherm dia -4,5 any atsimo andrefan'i Belarosi ary -8 any avaratra-atsinanana. Any amin'ny faritra maro, mandritra ny 4 volana mahery isan-taona dia tsy miakatra 0 ny mari-pana.
Ny hafanana amin'ny hafanana amin'ny Minsk
Ny satroka rata-rata any Belarus dia eo amin'ny 600 ka hatramin'ny 700 mm. Ny 70 isan-jatony amin'izy ireo dia ny volana aprily ka hatramin'ny oktobra. Ny isan'ny oram-panala eto dia miovaova amin'ny 75 any amin'ny faritra atsimo andrefana ka hatramin'ny 125 any avaratra atsinanana. Ny fonon'ny oram-panala dia mety hanana haavon'ny haavony 15-30 cm.
Orana antonony ao Minsk
Ho an'ny fialamboly any Belarus amin'ny fahavaratra, ny vanim-potoana mety indrindra miaraka amin'ny mari-pana isan'andro eo ambonin'ny +15 dia mitombo ny faharetany amin'ny lafiny atsimo andrefana avy any avaratra atsinanana. Any Poozerie dia maharitra 60 ka hatramin'ny 89 andro, any amin'ny faritra afovoan'ny firenena - hatramin'ny 90 ka hatramin'ny 95 andro, ary ny Poloney Belarosiana - hatramin'ny 96 ka hatramin'ny 114 andro. Ny salan'isan'ny mari-pana isan'andro amin'ny fahavaratra amin'ny rano ao amin'ny firenena dia mihoatra ny +17, ny volana Jolay - farafaharatsiny +19.
Havanana havanana any Minsk
Ny vanim-potoana tsara indrindra ho an'ny fialamboly amin'ny ririnina miaraka amin'ny maripana amin'ny elanelana -5 ... -15 eo ho eo manomboka amin'ny 30 andro any atsimo andrefan'ny Belarus ka hatramin'ny 60 any avaratra atsinanan'i Belarus.
Ririnina any Belarus
Weather in Belarus now + forecast
Safidio ny faritra na tanàna ilainao, ary koa ny sosona ary mahazoa ny fampahalalana ilainao. Layers - hamandoana, hafainganan'ny rivotra, onja, orana, rahona sns. Any Belarus. Ireo rehetra ireo dia misy amin'ny widget eto ambany.
Fiantsenana ao Belarus
Tombontsoa amin'ny fiantsenana ao Belarosiana:
Vokatra avo lenta sy lafo vidy eo amin'ny famokarana eo an-toerana (akanjo sy makiazy).
Ny fanomezana isan-karazany.
Sakafo matsiro miaraka amina singa faran'izay voajanahary indrindra.
Safidy marika marika erantany.
Ny vidiny mirary amin'ny vokatra rehetra.
Be dia be ny varotra fialan-tsasatra, fihenam-bidy, programa fihenam-bidy.
Ho an'ireo maniry ny hividy tsaratsara kokoa amin'ny fivarotana any Belarosiana, dia mandamina fampiroboroboana miaraka amin'ny fihenam-bidy marobe sy bonus mahafinaritra hafa izy ireo:
Fihenam-bidy ho an'ny 8 martsa 23 febroary sy 14 febroary.
Discount amin'ny 1 septambra.
Fampiroboroboana sy fivarotana ny vokatra vita amin'ny hakingana
Ao amin'ireo toeram-pivarotana lehibe sy ny gadra tsena lehibe dia misy ny programa fihenam-bidy.
Hatramin'ny 2013, ny rafitra Free Tax dia efa niasa teto amin'ity firenena ity, izay ahafahan'ny vahiny mamerina ny VAT amin'ny entana novidy tany Belarus.
Ny sandan'ny Belarosiana dia roble Belarosiana.
Kaody iraisam-pirenena - BLR
Symbol - Br
Amin'ny fiandohan'ny 2020 eo amin'ny fiainana andavanandro, dia misy volafotsy izay misy sandan'ny tarehy 5, 10, 20, 50, 100, 200 ary 500, ary koa vola madinika mitentina 1, 2, 5, 10, 20 ary 50 kopecks, 1 sy 2 roubles.
Ruble belarosiana (banknotes)
Vola (belle belarosiana)
Amin'ny fomba ofisialy, ny vola any amin'ny magazay any Belarus dia tsy atao afa-tsy amin'ny volam-pirenena, noho izany, na inona na inona vola azonao, dia tsy maintsy hatakalo rubles Belarusian.
Ny foto-kevitry ny "mendrika" amin'ny tahan'ny fifanakalozana dia azo ampiharina amin'ny vola toy ny dolara amerikana, euro, ary ruble rosiana.
Ny vola hafa dia azo ovaina, saingy tsy hitovy ny tahan'ny hafa amin'ny tombony.
Ny tahan'ny fifanakalozana rubziana Belarosiana ho an'ny androany
Fifanakalozana fifanakalozana ankehitriny!
Ny tsiron'i Belarus. Inona no hiezaka?
Ny mampiavaka ny nahandro belarosiana dia ny fanaparitahana lovia ovy. Ho fanampin'izany, saosisy, holatra, henan-kisoa ary serealy maro karazana no ampiasaina betsaka.
Pancakes ovy belarosiana
Ny mpitarika tsy tapaka eo amin'ny lovia belarosiana dia ny draniki. Nanjary nahazatra azy ireo tamin'ny fandrahoan-tsakafo avy amin'ny firenena manodidina azy ireo. Afaka mahandro pancakes ovy amin'ny fomba isan-karazany ianao, ka samy hafa ny tsirony.
ny mpanao ody ratsy
Mpanendrikendrika (fahandroan'i Belarus)
Ny mpamosavy dia lovia nasionaly iray hafa, tamin'ny andro taloha vita amin'ny koba, ny singa ao dia lafarinina, atody, sira ary ranom-tongolo. Saingy ankehitriny, ny mpamosavy dia vita amin'ny koba miorina amin'ny ovy. Raha ny fisehoany dia mitovy kely amin'ny pancakes izy ireo, saingy matevina kokoa noho ilay farany noho ny famenoana, izay mety ho samy hafa be.
Machanka miaraka amin'ny pancakes
Machanka koa dia iray amin'ireo lovia mahazatra an'ny nahandro belarosiana. Ny anarany dia avy amin'ny fomba fanjifana - pancakes na pancakes ovy dia atsoboka ao amin'ny machanka. Ity lovia ity dia manana tsiro tena tsara ary toa gravy matevina karazana hena isan-karazany. Ny fomba fahandro mahazatra dia misy taolan-kisoa, saosisy namboarina, bacon ary brisket mifoka.
Kulaga - tsindrin-tsakafo Belarusian mahaliana
Amin'ireo tsindrin-tsakafo, ny kulag dia tokony hojerena. Vonona amin'ny karazana voankazo isan-karazany (blueberry, blackberry, serry vorona, raspberry, sns). Arotsaka amin'ny hafanana ambany izy ireo mandra-masaka. Arotsaka ny lafarinina, ny rano ary ny siramamy. Aleo mangotraka izany mandra-pahatongan'ny fahatongavan-jaza sy omena pancakes.
Coat of arm Belarus
Fomba fitantanan'ny governemanta: Repoblika Belarosiana
Language: Belorussian, rosiana.
Traffic: Lafiny ankavanana
Kaody finday: 4375 +
Sandam-bola: Ruble belarosiana (Br - BYN)
Sehatra Internet: .by, .white